Ku rakib xargaha ArchLinux Adoo gacanta ku ah | Laga soo bilaabo Linux
Adobe waa shirkad siisa alaab aad u wanaagsan oo laxiriira Naqshadeynta, Multimedia-ka iyo Teknolojiyada Webka, ilaa iyo iminkana, qof kastaa wuxuu ku qasbanaaday inuu bixiyo shatiga si uu ugu adeegsan karo mustaqbalka fog. Photoshop, Flash, Dreamweaver, waa uun tusaale ka mid ah.
qaansada ku Maaha talaabada ugu horeysa ee Adobe da adduunka Meel furan, horeyba ugu jiray Laga soo bilaabo Linux waan aragnay sidii sanad ka hor ay soo daabaceen qoys font loo yaqaan Xigasho Sans Pro (mid la mid ah mawduucayagu adeegsado: P) hoosta SIL Liisanka Font Furan 1.1.
Waxaan sidoo kale aragnay sida loo rakibo en Ubuntu 13.04 iyo warka wanaagsan ayaa ah, sidoo kale wuxuu ku jiraa keydadka AUR de Archlinux, markaa waa inay kufilan tahay in la dhigo barta:
$ yaourt -S brackets-git
Laakiin waxaa ii soo baxday in aanan isticmaalin Yori, iyo markaad isku dayeyso inaad abuurto xirmo rakibid leh pkg, Waxaan ubaahanahay xoogaa ku tiirsanaan ah oo waliba kujira AUR. Marka la soo koobo, shaqo aad u badan.
Ya Waan hoos u dhacay binary qaab ahaan .deb si loogu rakibo debian hiinraag, laakiin dhibaatooyinka ku tiirsanaanta awgeed macquul maahan. Waqtiga aan qoray maqaalkan, goobta qaansooyinka ayaa hoos u dhacay.
Waxaa soo baxday in a .deb waxa gudaha ku jira waa feylasha ay tahay in lagu dhejiyo galka qaarkood, markay tahay qaansada ku en / usr / wadaag /, sidaa darteed aragti ahaan, haddii aan koobiyeeyo wax kasta oo galka uu tilmaamayo, waan fulin lahaa qaansada ku. Sidaas ayay ahayd.
Waan furay .deb isticmaalka Ark, oo waxaan hayey galka la yiraahdo qaansooyinka-kala-bax-28-LINUX64. Waxaan aaday galkaas oo waxaan furayay feylkii xog.tar.gz, taas oo ii abuurtay galka la yiraahdo usr. Waxaan ka soo gaadhay boosteejada oo waxaan ku orday:
$ sudo cp bin / qaansooyinka / usr / bin / $ sudo cp -R lib / brackets / / usr / lib64 / $ sudo cp -R share / applications / brackets.desktop / usr / share / applications / $ sudo cp share / icons /hicolor/scalable/apps/brackets.svg / usr / share / icons / hicolor / scalable / apps /
Dhowr ilbiriqsi gudahood ayaan ku haystay astaamihii qaansada ku menu-ka, laakiin markii aan ordayay waxba ma dhicin. Waxaan ku sameeyay iyada oo loo marayo terminaal waxayna bilaabeen inay khaladaad tuuraan:
Inta soo hartay way fududahay, waa inaan galiyaa boosteejada:
$ sudo ln -sf /lib64/libplc4.so /lib64/libplc4.so.0d $ sudo ln -sf /lib64/libnspr4.so /lib64/libnspr4.so.0d $ sudo ln -sf /lib64/libudev.so / lib64 / libudev.so.0
Oo diyaar. Waxaan horey uhelay qaansooyin shaqeynaya aniga oo aan wax badan kuqasan Archlinux.
Si fiican ayaan u tijaabin doonaa oo waxaan sameyn doonaa isbarbardhig Qaamuusyada vs SublimeText. 😉
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Ku rakib qaansooyinka ArchLinux adoo gacanta ku wata
Kaliya hadal: Yaourt WALIGAA looma isticmaalo sudo. Fiiri, waan kugu soo celiyay adigu lallabo laakiin waxaad moodaa inaad ku adkeysanayso inaad sidaad rabto u sameyso. xD
Man, sida a tip ammaanka si aad u wanaagsan, laakiin kaalay, qof walba waa ogyahay waxa ay ku sameeyaan kumbuyuutarkooda. Bilowga, ma adeegsanayo Yaourt, laakiin waxaan doonayaa inaan kaa farxiyo oo aan ku saxo qodobka 😛
Taas waan ku raacsanahay ayuu yidhi. Sidoo kale, ma isticmaalo SUDO sidaa darteed waxaan badanaa u arkaa inay tahay hal dhib kale, maaddaama runtu tahay in nidaamkani kaa badbaadin karo dhibaatooyinkaaga, laakiin laftiisa laf ahaantiisa badanaa way ka dhib badan tahay Windows Vista UAC.
Isla waxaan ka idhaahdaa SUDO. Runtii waa dhib hadii aad ogaatay in marar badan aad rakibtay codsiyo badanaa u baahan xidid si loo rakibo.
Sababta aan loogu isticmaalin SUDO yaourt?
Haddii aad u isticmaashid suudo gudaha yaroo waxaad khatar ugu jirtaa inaad maamulka siiso ogolaansho qoraal xun oo ku jira PKGBUILD. Ka sokow, yaourt wuxuu ku weydiinayaa lambarka sirta ah ee loo yaqaan 'sudo password' markaad rakibineyso xirmada, markaa uma baahnid inaad bilowga geliso
Ku jawaab py_Crash
Hore ayaan ugu rakibikaraa Trisquel 😀 Waxaan jeclaanlahaa inaan la wadaago cida aan qori karo emayl si aan wax ugu darsado
Jawaab Juan Antonio
Font-ka ay adeegsato meeniska ma la beddeli karaa?
Waan arkaa sababta bogga soo dejintu u hoos u dhacay ... sprint-29 hadda waa la heli karaa, nasiib darrose waxaad arkaysaa inay wax is beddeleen, tilmaamaha rakibidda ee qoraalkanna aan mar dambe la adeegsanayn. Elaaaaav, waqti la cusbooneysiiyo 😉
Hahaha, taasi waa waxa aan ku socdo ..
Hadaad saxtahay, inakastoo aysan waxbadan isbadalin, iyo inaad isticmaasho galka optka markaad fureyso feylka .. Inkastoo aan shaqeynayo .. Hadaad cusboonaysiiso boostada waan arki doonaa hadii aan sameeyay talaabooyinkii saxda ahaa hahaha
$ sudo ln -sf /lib64/libudev.so /lib64/libudev.so.0
Saaxiib, waa inaad cadeysaa in khadkaasi uu kuugu adeegay kaliya kumbuyuutarkaaga, sida cusub oo aan u adeegsaday mana aanan bilaabi karin nidaamkeyga maxaa yeelay feylkeygu wuxuu ahaa libudev.so.0.13.1 XD.
Horey ayaan usameeyay, waxay un badalaysay iskuxirka.
Waad salaaman tahay, maqaalka waa mid aad ufiican, salaan waxaanan kugu martiqaadayaa inaad tijaabiso BSD.
Aad baad u mahadsan tahay, tani way i caawisay, laakiin inaan ka dhigo mid ku socota fedora 18 😀
Ku jawaab mrkzboo
Markii aan isku dayo inaan raaco talaabooyinka rakibida ee xariiqda taliska waxaan helayaa qaladka soo socda:
sudo cp -R lib / qaansooyinka / / usr / lib64 /
cp: kuma fulin karo 'stat' on "lib / brackets /": Faylka ama galka ma jiro
iyo markaan furayo Qaansooyinka.Fiideynta.0.42.64-bit ee xogta galka / usr / midkoodna lib ama lib / lib / brackets /
Ku jawaab Federico
Midkoodna rakibidda qoraalka sare ma shaqeynayo aniga. :::: wuxuu furaa barnaamijka laakiin waligiis ma muujiyo… .. xitaa kuma imaan karo fulinta isla galka.
Yosbanis Vicente dijo
Waad salaaman tahay, waxaan ubaahanahay caawimaad ku saabsan rakibida jiingadaha, isla waxii igu dhacay aniga iyo Federico oo ma aqaano waxaan sameeyo, waan ogahay inay mudo ahayd tan iyo daabicitaankan laakiin ma heli karo maqaal kale oo i caawiya . Fadlan hadii qof i caawin karo Mahadsanid
Jawaab Yosbanis Vicente
Nooca ugu dambeeya waxaad kaliya ku fureysaa ARK, fur fure terminal oo ku yaal galka aad hadda furayso oo aad fuliso
sudo cp -R qaansooyinka / opt
oo diyaar! 🙂
Jacob ugu jawaab
eOS - Bilowga wax weyn?